कम्पनीहरु आन्तरिक सामाजिक नेटवर्क को लागी | Martech Zone
बुधबार, जुन 18, 2008 आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
वेबमा सबै सामाजिक नेटवर्कहरू बारे जानकारीको एक टन छ, तर एक आन्दोलन सामाजिक नेटवर्क का केही फाइदाहरू इंट्रानेटमा ल्याउनको लागि आन्दोलन गरिएको छ। मैले शीर्षकमा आधा दिन सोशल नेटवर्कि session सेसनका लागि अनुसन्धान गरें जुनसँग मैले कुरा गरें IABC हिजो र खोजहरु मा गहिरो ध्यान लिन लायक थियो। जानकारी र स्क्रिनशटहरू फेला पार्न मैले गहिरो खन्नु पर्‍यो, तर त्यहाँ केहि कम छन् स्रोतहरू बाहिर कि इंट्रानेट लक्ष्य.
इन्ट्रानेट वास्तवमा फिजियो र वेब २.० टेक्नोलोजी भन्दा पहिले प्राय कम्पनीहरूमा मर्‍यो। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, किनकि धेरै कम्पनीहरूले एक विचारमा जमानत गर्छन कहिले यसलाई फिर्ता गर्ने विफलता भएपछि। मूल इन्ट्रानेटहरू मुख्य वेब पृष्ठ निर्माणकर्ता बाहेक अरू केही थिएन जुन प्रत्येक विभागले समाचार र सूचना पोष्ट गर्न प्रयोग गर्नुपर्‍यो, कुनै स्रोत वा कुनै स्वचालित बिना। माइक्रोसफ्टले शेयरपोइन्ट सुरू गर्‍यो, तर सामग्री स्वचालित गर्न र यसलाई कायम राख्नको लागि आवश्यक प्रयास अझै पनि औसत कर्मचारीको सीप स्तर भन्दा माथि थियो।
को आगमन संगै Google Apps, सामाजिक नेटवर्कहरू, विकिस, विन्डोज शेयरपोइन्ट सेवाहरू and.० र अन्य सहयोगी र नेटवर्कि net उपकरणहरू, यो इन्ट्रानेटको लागि पुन: फिर्ताको लागि समय आइसकेको छ।
आन्तरिक सामाजिक नेटवर्क को लागी व्यापार केस
मोनिटर र ड्राइभ कर्पोरेट रणनीतिहरु - कर्मचारीहरू, टोली र परियोजनाहरू कर्पोरेट दर्शनको साथ मिलाइएको सुनिश्चित गर्नुहोस्।
सपाट कम्पनी हाइरार्की - सीईओ देखि न्यूनतम कर्मचारी र यसको विपरीतमा सीधा मार्ग प्रदान गर्दछ। यसले सुधारिएको संचार, पारदर्शिता, विश्वास र सशक्तिकरण कर्मचारीहरु को।
आन्तरिक नेटवर्कि Prom प्रचार गर्नुहोस् - कम्पनी भित्र र बाहिर दुबै साझा चासोको साथ अन्य कर्मचारीहरु को एक साधन संग कर्मचारीहरु प्रदान - खेल, चर्च, शौक, आदि। एक कडासँग जोडिएको श्रमशक्ति हुनु कर्मचारीको सन्तुष्टि र अवधारण बढ्छ।
विचार - विचार जेनेरेसन - विचार उत्पन्न गर्न उपकरणहरू प्रमुख कम्पनीको ईन्ट्रानेटको केहि भर आम हुन्छन्। वास्तविक पैसा र अन्य पुरस्कारका लागि विचार प्रचार गर्नका लागि Digg- जस्तो उपकरणहरू सामान्य छन्।
समाचार र सूचना - शेयर कम्पनी र कर्मचारी समाचार र प्रेस विज्ञप्ति।
संसाधन - पुस्तकालयहरू, ट्यूटोरियलहरू, मार्केटिंग सामग्री, उत्पाद कागजात, मद्दत, रणनीति, लक्ष्य, बजेट, आदि प्रदान गर्नुहोस्।
ज्ञान साझेदारी र सहयोग - विकी र साझा अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्नुहोस् परियोजना आवश्यकताहरू, कागजात इत्यादिको गति बढाउन।
प्रोजेक्ट-आधारित वर्कफोर्कe - कर्मचारीहरुलाई भौतिक स्थान, कौशल स्तर, विभाग, आदि बाहिर संगठित गर्न एक साधन प्रदान गर्न कुञ्जी कर्मचारी खोज्न र पत्ता लगाउन को क्षमता को प्रक्रिया बाट आदेश को श्रृंखला हटाउन, भर्चुअल टीमहरु लाई छिटो संगठित र कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिदै।
नेटको समीक्षा गर्दा त्यहाँ धेरै 'स्वादहरू' थिए कि कसरी कम्पनीहरूले उनीहरूको इन्टर्नेट मार्फत सञ्जालहरू डिप्लोय गर्दैछन - र कम्पनीहरूका विशेषताहरू र उनीहरूका उपकरणहरूले बताइरहेका छन्। कृपया यहाँ मेरो खोजीमा मलाई नलुकाउनुहोस् - किनकि मँ गुगल, माईक्रोसफ्ट, याहू र आईबीएम को लागी सीधा पहुँच छैन, म लेख र स्क्रिनशटहरु संग काम गर्दै छु जुन हप्ताहरु वा बर्ष पुरानो हुन सक्छ!
गुगलको मोमा साधारण खोज ईन्जिन छैन, मोमाले मानव संसाधनलाई अनुक्रमणिका र पहिचान गर्नका साथै डिजिटल सम्पत्तिहरूको लागि पनि अनुमति दिन्छ। केहि साइटहरूबाट मैले पढेको हो, गुगलसँग समान रूपले प्रभावशाली वेब आधारित कोड समीक्षा प्रणाली छ, भनिन्छ Mondrian.
याहू! घरपछाडि तिनीहरूको मिसन बयान प्रमुखताका साथ प्रदर्शन गर्नका साथै उनीहरूको ब्यक्तिलाई कामदारहरूको लागि प्रयोग गर्न सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्न देखिन्छ। म यस्तो देखिन्छ कि कसरी पोलिशमा आश्चर्यचकित छु - र, रणनीति भएकोमा याहूको चुनौतीहरूको आधारमा, मलाई थाहा छैन कि यस दृष्टिकोणले कत्तिको राम्रो तरीकाले प्रतिफल दिइरहेको छ।
IBM जत्तिकै ठूलो स organization्गठनमा, सयौं हजार कर्मचारीको साथ, सायद यो एक राम्रो विचार हो कि साइटहरू राख्नु जहाँ मान्छेहरूले एक अर्कालाई भेट्टाउन सक्छन्! Beehive कर्मचारीहरूलाई अन्य कर्मचारीहरू पहिचान गर्न र पत्ता लगाउन एक उत्तम स्रोत जस्तो देखिन्छ।
माइक्रोसफ्टको साइट वास्तवमा आफ्ना कर्मचारहरूको लागि उनीहरूको उत्पादनहरू र सेवाहरूमा संसाधनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। हालसालै, यद्यपि माईक्रोसफ्टले सुरुवात गर्‍यो टाउन्सक्वायर - नेटवर्कि and र सहकार्यका लागि सामाजिक अनुप्रयोग.
तपाइँको कार्य प्रक्रियाहरूमा सहयोग उपकरणहरू समावेश गर्न तपाईं ठूलो कम्पनी हुन आवश्यक छैन। मेरो कम्पनीमा, हामी पूर्ण रूपमा सार्यौं Google Apps र यो संग एकीकृत छ SalesForce.
जुन 18, 2008 मा 11: 40 PM
हे डग, उपयोगी पोष्ट - मेरो कम्पनीमा हामी Google अनुप्रयोगमा पनि सार्यौं। यसको सुपर उपयोगी। त्यसैले आन्तरिक च्याटको उद्देश्यका लागि र यस्तै महान चीजहरू। क्यालेन्डर र कागजातहरू आन्तरिक उद्देश्यको लागि पनि उत्कृष्ट हो। यद्यपि मलाई सानो गल्ती याद भयो। मिडिया कम्पनीको रूपमा, हामी धेरै प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दछौं र मलाई लाग्छ कि म मेरा सबै कामदारहरू मेरो सबै प्रोजेक्टहरूमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहान्छु। हामी स्विच भयो डेस्कावे र मलाई लाग्छ कि सबै समयमा म अधिक नियन्त्रणमा im जस्तो महसुस गर्दछु। यसका साथै प्रत्येक परियोजना भित्र साझेदारी सुविधाहरू छन् त्यसैले म ब्लग र फाईलहरू साझा गर्न सक्दछु - परियोजनाहरूमा वस्तुलाई कम्पार्टरेलाइज्ड राख्दै - र एनालिटिक्स थप गरिएको बोनस हुन्। अनुप्रयोगमा हराएको कुरा च्याट हो तर गुगल अनुप्रयोगले यस भन्दा बढि बनाउँदछ। DA मात्र उपकरण छैन - त्यहाँ Zoho र Wrike र बेसक्याम्प आदि। - तर मलाई लाग्छ कि डेस्कावे धेरै व्यावहारिक थियो - $ १० - $ २ - - तपाइँको आवश्यकतामा निर्भर छ र यसले एक सुपर इन्टरफेस पनि पायो - के तपाइँ त्यस्ता कुनै उपकरणहरू प्रयोग गर्नुभएको छ?
तथ्यलाई प्रेम गर्नुहोस् जुन तपाईं भिडियो टिप्पणीहरूमा समावेश गर्नुहुन्छ 🙂
सेप्टेम्बर 6, 2008 मा 11: 37 AM
धन्यवाद आदित्य, म सिस्मिकको ठूलो प्रशंसक हुँ!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 5::2008० अपराह्न
राम्रो पोष्ट तपाईले एउटा याद गर्नुभयो जुन जैविक रूपमा विकसित भएको छ, दुई कर्मचारीहरूले खुला स्रोत प्लेटफार्महरू र विकास (ड्रपल) प्रयोग गरेर निर्माण गरेका हो र एन्टि-टप-डाउन दृष्टिकोणको उत्कृष्ट उदाहरण हो। Blueshirtnation.com, सर्वश्रेष्ठ खरीदको आन्तरिक सामाजिक नेटवर्क। ग्यारी कोइलिंग र स्टीव बेन्ड्ट निर्माताहरू हुन्। केहि लिंकहरू ...
तिनीहरू पनि Charlene ली को पुस्तक मा उल्लेख छ, "ग्राउंडवेल"।
सेप्टेम्बर 6, 2008 मा 11: 28 AM
धन्यवाद! यो वास्तविक पेची .्ग हुन्छ जब वास्तविक कर्मचारीहरूले यसलाई आफुमा लिन्छन् सामाजिक नेटवर्क सुरु गर्नका लागि। म यसलाई जाँच्दै छु।